प्रियंका इजी कि विजी ? – Mero Film
प्रियंका इजी कि विजी ?
सबैजना इजी हुँदैमा वीजी हुँदैनन् । कतिपय वीजी हुँदैमा इजी पनि हुँदैनन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीका लागि कुन चाही कुरा सही होला ?
सोमबार रिलिज भएको ‘काफल पाक्यो’ गीत फिल्म वादशाह जुटमा समावेश छ । यो गीतमा फिल्मका २ जना हिरोइनले पनि थोरै अनुहार देखाएका छन् । मुख्य कुरा त यो गीतमा अभिनेत्री प्रिंयंका कार्कीले नृत्य गरेकी छिन् । प्रियंका यो फिल्मकी हिरोइन होइनन् । तर, उनले ३ दिन लगाएर खिचिएको गीतमा नृत्य मात्र गर्न पनि भ्याइन् ।
प्रियंका कार्कीको काम गराई हेर्दा लाग्दैन कि, उनलाई अहिले भोक प्यास केही छ । काम काम काम । नेपालमा हुँदा काम, नत्र विदेशको कार्यक्रम । प्रियंकाको यो व्यस्तता अरु हिरोइनका लागि डाहा गर्न लायक नै होला ।
यसरी कुरा गरिरहँदा, अभिनेत्री प्रियंका कार्की वीजी त छिन् । तर, उनी वीजी हुनुको कारण साच्चिकै उनी चलेर हो या उनी इजी भएर हो । प्रियंकाले सम्झन लायक फिल्म खेलेकी छैनन् । बरु, जुन फिल्ममा पनि गीत मात्रमा भएपनि काम गरिदिएकी छिन् । अतिथी बनेर पनि अभिनय गरेकी छिन् । यसो भनिरहँदा प्रियंका कार्की वीजी हुनुको कारण इजी भएर पनि होला ।
प्रियंका यति धेरै इजी छिन् कि, उनलाई फिल्ममा लिन गाह्रो छैन । फिल्मको गीतमा मात्र नचाउन पनि गाह्रो छैन । यति साह्रो इजी भएर वीजी हुँदा भोलीका दिनमा बीजी हुनलाई इजी भएर पनि काम नहुन सक्छ ।
२०७५ असोज २२ गते १४:२६ मा प्रकाशित